Warshadaha Balakoonka Shiinaha ee Daaqada muraayadaha Ares80-1 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kinzon
Balaastikada Balakoonka waa qeyb muhiim ka ah balakoonnada badankood. Waxay kordhiyaan qulqulka iftiinka marka lagu daro sameynta balakoonka oo u muuqda mid casri ah oo soo dhaweyn leh. Sida muraayadaha Glass iyo Flying Glass, Balcony Glass wuxuu ubaahanyahay badanaa waxaa laga sameeyaa shey qaas ah iyo adeegsiga qaabab qaas ah oo lagu soosaaray Glass Tempered Glass. Muraayaddu waxay u baahan doontaa in la beddelo inta lagu jiro shilalka, dayactirka iyo sidoo kale inta lagu jiro dhammaystirka dhismaha.
Nooca ugu sarreeya Shiinaha / Brand Jarmalka
Orodyahannada Ugu Fiican
U adeegso giraangiraha wax sidda oo si tartiib ah u kala bixi.
Dhameystirka Dusha kore
Qalabka budada ka kooban / Caanood / Electrophoresis / PVDF
Biyaha iska caabbinta
5.U-Qiimaha <w / m2.k
5mm + 9A + 5mm & 8mm galaas kulul
Waxa jira astaan ​​waddo oo la socon karo si looga fogaado biyaha iyo boodhka muraayadda quraaradda Balcony
Adeegga OEM ee Adeegga Naqshadeynta ee La Soo Bandhigay oo La Soo Bandhigay Soo-iibiyaha Label La Bixiyay
Waxaa jira heerar sare oo fudud iyo qaab ah marka loo adeegsanayo muraayadda balakoonka. Waxaa loo naqshadeeyay si dhammeystiran, daaqadaha muraayadaha balakoonka ah ee loo yaqaan'Ar80-1 'waxay u oggolaaneysaa dabayl cusub gurigaaga uun haddii ay si dhakhso leh u riixaan xargaha. Qolka wuxuu u dhowdahay inuu cadeeyo dhawaaqa wuxuuna ka go'ay wasakheynta bannaanka markii ay xiran tahay.
Muraayadaha muraayadaha balbala ahAres80-1 wuxuu ka kooban yahay labo ama kabadan xariiq toosan oo lagu dhejiyo waddada leh rollersiyada dhaqaajinta ama dhinac ubaro. Iyada oo si buuxda loogu wareejinayo silsiladaha min hal ilaa gees kale, daaqaddu waxay bixisaa hawo ballaaran. Hadday tahay balakoonkaaga, qolalka jiifka ama hoolalka waaweyn, daaqada muraayadda balakoonkaAres80-1can waxay ku habboontahay waxayna ku kordhisaa qaabkeeda casriga ah ee guriga-iftiinka leh.
WAA MAXAY FEATURESKA IYO FURSADAHA muraayadda quraaradda BalkooyAr80-1:
1. Waxaa lagu heli karaa midabbo iyo naqshado kala duwan
2. Wax soosaarasho gaar ah oo loogu talagalay furitaanka ballaaran
3. Kuleyl aad u fiican, dhawaqa iyo boodhkulada oo leh ciriiri hawada
4. Nidaam quful (Multipoint system quful) marka la codsado
5. Dooro laba koob iyo hal koob
6. Wadada roobka iyo sill si aad uga fogaato biyaha roobka
Hore: Aluminium Bi-laabid Albaabka Ares75FT
Xiga: Daaqad Siishash leh kaneecada Net Ares80-1
Muraayadaha quraaradda Aluminium
Dariishadaha Aluminiyamka leh Shabaqa
Aluminium Vertical Suuqa Dhaqaajidaha Ares85
Daaqada Guriga Ares80
Daaqad Siishash leh kaneecada Net Ares80-1